Waxay noqon doontaa mid aad u xanuun badan si ay u arkaan haddii ay ka soo baxaan goobaha bini-aadanka ah waa dhab - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » madadaalo Waxay noqon doontaa mid aad u xanuun badan si loo arko haddii taasi ka soo baxdo goobaha bini-aadanka waa dhab - BGR
Haddii aadan horey u fileynin Marvelaadu inaad jebiso wadnahaaga Rakaabka: Dhamaan Ugu dambeyntii waxaad timaadaa filimada, waxaad ku raaxeysaneysaa naftaada. Agaasimayaasha labada filimood ee ugu dambeeyay laga bilaabo weerarka ayaa marar badan sheegay in ay diyaar u yihiin inay argagaxaan dadweynaha ayna sameeyaan waxyaabo lama filaan ah. Si kale haddii loo dhigo, xataa haddii Endgame Dib u soo celiya geesiyaal badan oo dhacay iyo Thanos oo lumiyay dagaalkii Dr Strange saadaaliyay, dhammaanba arrintani waxay ku imaan doontaa qiimo.
Iyadoo maskaxda lagu hayo, waxaa loo isticmaalaa in la arko Endgame xayeysiis internetka ah oo ka yimaada dadka sheeganaya in ay arkeen muusig ku dhowaad filimka, ama ogaanshaha dhacdada Endgame . Qaar ka mid ah sheekooyinkaasi waxay sameeyaan dareen badan, halka kuwa kale, sida midka aad tahay inaad aragto, waxay ku jiraan dhinaca duurjoogta. Si kastaba ha noqotee, haddii ay taasi dhacdo saxan tahay, waxaan u soconaa adduunka xanuun. Ka hor inta aanan bilaabin, waxaan kuu sheegi doonaa in laba toddobaad laga bilaabo marka hore, waxaa suurtogal ah in kadib ayaa dhici karta in ay dhacdo .
Si ka duwan sharaxaad faahfaahsan oo cajiib ah waxa ka socda wareegga ugu horeeya ee 20-30 ee Endgame Waxaan horay u aragnay, user Reddit Spoilsbedumpig ayaa soo bandhigay sheeko filim ah oo ka kooban qaar ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan ee qorshaha, oo ay ku jiraan dhowr dhimasho dhimasho iyo qorshe hawlgab.
Halkan waxaa ku qoran nuqulkii faahfaahinta ee faahfaahinkiisa:
Hal mar ha ku garaacin hal garaac.
Waa kuwan waxaan ogahay inaad dhammaantiin rabto inaad ogaato:
Dhimashada marka deynta ay dhaafto:
KALA SOCO inta lagu jiro bixinta deymaha
Cap. Ka dib, waxa uu lahaa qoob ka ciyaarkan Peggy.
Yaa dilaa qofka:
Thanos wuxuu dilaa Pepper, T'challa iyo Quill
Dhagaxtooyadu waxay dilaan Tony ka dib muuqaal muuqaal ah oo uu kula hadli karo isaga oo siin kara awood aan xad lahayn, halkaas oo uu jecel yahay inuu arko iyaga oo burburay.
Tony wuu dilaa Thanos
Gamora weli wuu dhintay
Ukunta qashinka; TONS ee gumeysiga adduunka qadarka ah, oo ay ku jiraan dusha sare ee "iyo haddii" caalamku yahay. Taageerayaasha Barca waa ay ku faraxsanaan doonaan.
Muuqaalkii ugu xiiso badnaa: shaki la'aan, waa Bruce / Hulk oo isku dayaya in uu fuulo badeeco. Waxaad arki doontaa. Foorno ficil ah.
Shuri waxay noqotaa godad madow
Bucky wuxuu noqonayaa Captain America.
Valkyrie wuxuu noqonayaa Thor cusub, aad u qurux badan.
Waxay u egtahay sida Captain Marvel uu qaadanayo doorka Iron Man. oh iyo hal wax kale: Manta dhoobada ayaa sheegaysa "Fit" ka hor inta aan la dilin Thanos. Waxaa. East. Great.
Inta badan aragtiyaha iyo dhufashada taageerayaasha ayaa leh Cape iyo / ama Iron ka baxaya MCU. Waxay u dhintaan ama ka fariistaan ​​ama isku dhafan labadaba. Ka baxsashadani waxay u aragtaa fikradahan. Xaaladdan oo kale, Tony wuu dhimanayaa, dibna wuxuu dib u dhigi doonaa xarig. Sida laga soo xigtay tilmaantan, Thor, oo ah sida dadka kale u dhiman doonaan filimka, waa inay sidoo kale ka fariistaan.
Laakiin waxa ugu xun ee ku saabsan tan ayaa ah in dhowr geesood oo kale ay dhiman doonaan, oo ay ku jiraan Black Panther iyo Star-Lord. Intaa waxaa dheer, Gamora weli wuu dhintay, Rhodey ayaa sidoo kale dhintay, sida uu sheegay Redditor. Iyo, sabab qaar ka mid ah, Pepper wuu dhintaa. Thanos wuxuu mas'uul ka noqon doonaa dhimasho dhowr ah, sida muuqata, iyo Tony uu ku guuleysan doono inuu dilo.
Redditor ayaa sidoo kale sheegeysa in Shuri uu noqonayo Black Panther, halka Bucky uu qaadan doono doorka Captain America ee mustaqbalka. Dhanka kale Valkyrie wuxuu noqon doonaa Thor cusub. Ugu dambeyntii, Captain Marvel wuxuu bedeli doonaa Nin Birta ah wuxuuna hogaaminayaa Rag
Sidaan horay u sheegay, waxay u muuqataa xanuun badan si aad u daawato, gaar ahaan haddii aad filayso in aad aragto jilayaasha sida T'Calla iyo Peter Quill mustaqbalka Marvelka. Suugaanta qoraashan ayaa ka daadanaya Endgame Sida muuqata waxa ku jira faahfaahinta go'aamadan, oo ay ku jiraan boodh aad u ballaaran (hoosta hoosta):
Jilaa ee BP waa donezo, wuxuu doonayaa inuu ka shaqeeyo mashaariicda kale iyo noocyada noocan oo kale ah 'filimkan'. Marvel wuxuu jecel yahay fursaddooda ah inuu noqdo filim superhero oo leh haween madow madow.
Waxaan u sheegay in ay asal ahaan noqotey Thor cusub, laakiin maaha inay u yeedhaan Thor.
Diidmo, dhimasho ayaa ka baxsan filimka, Chris Pratt ma ahan qaabka maskaxda ugu fiican ... sidoo kale xaqiiqdii maaha meel aan ku hadlo. Laakiin waad ogaan doontaa isla markiiba.
Bucky si toos ah ugu furfuran Cape Midabada isku midka ah iyo wax kasta, iyo xitaa weedh caanka ah oo aad wada filaysay Steve.